Nhau - Maitiro ekuvandudza kugadzikana kwekuratidzira kwe LED
Kubhadhara aluminium kufa kesi
Indoor yakatarwa yekumisikidza kabhodhi
Kunze yakatarwa yekumisikidza cabinet
Yakaumbwa tsika kabhineti
Akatungamirira cabinet chishongedzo
Maitiro ekuvandudza kugadzikana kwe LED kuratidza
Izvo zvinodikanwa kuti magetsi anofanirwa kugadzikana, uye kuchengetedza pasi kunofanirwa kuve kwakanaka. Iyo haifanire kushandiswa mune yakaipa yakasikwa mamiriro, kunyanya mune yakasimba mheni mamiriro ekunze. Kuti tidzivise matambudziko anogona kuitika, tinogona kusarudza kungochengetedza nekuchengetedza, kushandira, kuedza kuchengetedza izvo zvinhu zvinogona kukonzera kukuvara kuzere-kuratidza skrini kure nechidzitiro, uye pukuta chidzitiro zvinyoro nyoro kana uchichenesa, kuitira kuti uderedze mukana we kukuvara. Kutanga bvisa iyo LED kuratidza kweMaipu, wobva wadzima komputa.
Chengetedza hunyoro hwenharaunda umo iyo yakazara-ruvara LED kuratidza skrini inoshandiswa, uye usarega chero chinhu chine hunyoro chivakwa chipinde chako chizere-chevara LED kuratidza skrini. Kana iyo hombe skrini izere-yemavara inoratidzira ine humidity inogoneswa, izvo zvikamu zvekuzara-kwemavara kuratidzwa zvichave zvakaora uye kukuvara.
Kana paine mvura pachiratidziri nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana, ndapota bvisa magetsi nekukasika uye bata vashandi vekuchengetedza kusvikira panoratidzwa panhare mukati mekrini pakaoma.
Chinja kuteedzana kwe LED kuratidza skrini:
A: Kutanga batidza iyo yekudzivirira komputa kuti iite ishande zvakajairika, uye wozobatidza iyo LED kuratidza skrini.
B: Zvinokurudzirwa kuti iyo nguva yekuzorora yeiyo LED skrini inofanira kunge inopfuura maawa maviri pazuva, uye iyo LED skrini inofanira kushandiswa kanokwana kamwe pasvondo mumwaka wemvura. Kazhinji, iyo skrini inofanirwa kuvhurwa kanokwana kamwe pamwedzi kweanopfuura maawa maviri.
Usatambe mune chena dzese, dzvuku dzese, dzese dzakasvibira, dzese dzebhuruu uye mimwe yakazara yakajeka mifananidzo kwenguva yakareba, kuti isakonzere kuwandisa kwazvino, kupisa zvakanyanya kwetambo yemagetsi, kukuvara kwerambi re LED, uye kukanganisa hupenyu hwebasa kuratidza skrini.
Usatsemura kana kusanganisa skrini paunoda! Led yakazara-ruvara kuratidza skrini inoenderana zvakanyanya nevashandisi vedu, saka zvinodikanwa kuti uite basa rakanaka mukuchenesa uye kugadzirisa.
Kuratidzira kune yekunze nharaunda kwenguva yakareba, mhepo, zuva, guruva uye zvichingodaro zviri nyore kuve zvakasviba. Mushure menguva yenguva, panofanirwa kuve nechimedu cheguruva pachiratidziri, icho chinofanirwa kucheneswa munguva yekudzivirira guruva kubva kumonera pamusoro kwenguva yakareba, zvichikanganisa maitiro ekuona.
Iyo hombe skrini yekuratidzira kwe LED inogona kupukutwa nedoro, kana kucheneswa nebrashi kana yekuchenesa, asi kwete nejira nyoro.
Iyo hombe skrini ye LED inoratidzira skrini inofanira kuongororwa nguva nenguva kuti ione kana ichishanda zvakajairika uye kana dunhu racho rakakuvara. Kana ikasashanda, inofanira kutsiviwa nenguva. Kana dunhu racho rakakuvara, rinofanira kugadziriswa kana kutsiviwa nenguva.
Post nguva: Mar-31-2021
Kwete 44 Kengwei Street, Baoan Dunhu, Shenzhen Guta, China